Nezvedu - Henglin Jialong Metal
Jialong simbi zvigadzirwa fekitori, yakavambwa muna 2007, ndeimwe yekutanga dzimba vagadziri vanoita muR & D, kugadzirwa uye kutengesa kwehembe mbichana.
Mumusika wepamusha huwandu hwakawanda hwekutengesa, hwakatengeswa kuMalaysia, Singapore, Panama, Vietnam uye nepasi rese.
Caiyi hembe hanger ibasa rinogadzira kugadzirwa kwemagetsi hembe hanger, yekunze yekupeta mbatya hanger nealuminium mbatya hanger.
RUTSVENE SENYAYA DZOKUTYAIRA, KUSVIMBIKA SESIMBA DZAKANAKA, KUTI UGADZE WIN-WINA RIMWAYA.
Zvipfeko zvedu zvakagadzirwa nemhando yepamusoro yealuminium alloy mbishi zvinhu, uye zvine hunyanzvi hwekurapa pamusoro. Iyo hanger ine yakafanana anti-ngura uye anti-kukwegura zvivakwa izvo zvimwe zvigadzirwa zvakafanana hazvigone kufanana, uye yakasimba.weather resistant uye kukwesha kusagadzikana, iri nani zvakanyanya kupfuura zvimwe zvakafanana zvigadzirwa. Iyo dhizaini yakasimbiswa pakati iri yakasimba uye yakasimba, iyo inoshandiswa kuomesa mbatya pabharanda remhuri, iri nyore uye yakawanda yekuchengetedza nzvimbo.
Vashandi vese kuti vave nechokwadi chekuti mushandisi wega wega ape zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, chikamu chimwe nechimwe chega chega chiitiko chakanyatsoenderana nematanho epasi rese ekugadzira nekugadzirisa.
Isu tinoshandisa michina yemhando yepamusoro, yemanyorero akaturikidzana pamusoro pechitsiko, neepamba yemhando yepamusoro gungano rekugadzira michina, musangano wekugadzira musangano uri pachena, kugona kwepamusoro kwekugadzira.
1: Iyo chigadzirwa mhando yakanaka kwazvo, iyo dhizaini dhizaini uye ine rupo, iyo inobata kugona yakasimba, iyo yekumisikidza iri nyore, yakakodzera kutenga.
2: Kugadzirwa kwakanaka, kuisirwa kwakanaka, zvishongedzo zvakakwana, akangwara kutonga kure kupindura inonzwisisika, iri nyore uye nyore kushandisa.
3: Yakasimba zvakakwana, uye yakanaka dhizaini, mbatya rack uye kuomesa, UV disinfection, mweya yekuomesa mhedzisiro, yakanaka kwazvo!
4: Iyo nguo yekuomesa pole inoshamisa zvakanaka. Iyo pole yakakora zvakakwana, yakasimba uye yakasimba. Huwandu hwemakomba hwaringana mbatya dzemhuri. Zvakanaka kuomesa matatu makobvu matete.